Codons pour la planète » nokarakarain’ny Orange Madagacar teny amin’ny Orange Digital Center ny faran’ny herinandro teo, izay niarahany niombon’antoka tamin’ny PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement). Natokana ho an’ny ankizy io, ka kilonga 10 taona noho miakatra manodidina ny efapolo isa no nandray anjara atamin’ity atrik’asa ity. Tanjona tamin’izany mantsy ny hanao fanentanana ny ankizy momba ny fiovaovan’ny toetr’andro, ka mifandraikira amin’ny Fanamby 17 ao anatin’ny Tanjon’ny Fampandrosoana Lovain-jafy na ODD (Objectif de Développement Durable) io. Nandray anjara tamin’ny alalan’ny fampisehoana sy lalao miendrika tetikasa kely ireo ankizy, ka naseho tamin’ny endrika fifaninana izany. Mifototra amin’ny fampiasana ny « codage informatique » ny zava-drehetra tao anatin’io karazana hetsika miendrika fanentanana mahomby sy mitondra fivoarana momba ny fiatrehana ny fiovaovan’ny toetr’andro io. Ho an’ity taona ity, firenena miisa valo misy ny tambajotran’ny Orange Digital Center no mandray anjara amin’ny « SuperCodeurs “Codons pour la planète” », ka hifampizara ireo asany ao anatin’ny fifanakalozana, ka tafiditra ao anatin’izany i Tunisie, Côte d’Ivoire, Maroc, Jordanie, Madagasikara, Sénégal, Mali, ary i Cameroun. Manana anjara toerana lehibe ao anatin’ny fanatanterahana ity tetikasa ity moa ny Orange Fondation.
Roby Alphonse efa nogadraina in-dimy “Saika hovonoina tao Tsiafahy noho ny ady aho”
“Resaka tany efa vita ny raharaha Belambo any Toamasina II, fa mivadika ho habibiana. Misy tany 148 Ha niadiavan’ny vahoaka tamin-dRtoa Ranoromalala.
Trafika tany Kaomoro Ny olona tafody, fa ny volamena tavela
Tonga omaly tamin’ny 8ora sy sasany maraina teto an-tanindrazana niaraka tamin’ireo iraka ara-panjakana nankany Kaomoro ireo roalahy isan’ny voasambotra tamin’ny fahatrarana volamena 49 kg tany amin’ny Nosy Kaomoro ny 28 desambra 2021 lasa teo.
Orinasa JIRAMA Mitady « releveur »
Mitady mpanamari-jiro sy rano na “releveur” amin’izao fotoana izao ny orinasa Jiro sy rano Malagasy na JIRAMA.